၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာ ၂၀ မှ ၂၀ နာရီနောက်ဆုံးအခြေအနေကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း - သိကောင်းစရာများ - TELES RELAY
၂၀၂၀ အောက်တိုဘာ ၂၀း၂ နောက်ဆုံးအခြေအနေကိုမည်သို့ထည့်သွင်းရမည်နည်း။ သိကောင်းစရာများ
By Tele RELAY တစ်ခု On နိုဝင်ဘာ 21, 2020
3 ကာလအတွင်းတရားအားထုတ်ရန်နှင့်စိတ်သက်သာစေရန်လျှောက်လွှာသုံးခု ...
macOS X ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပါ (၁၀.၁၁၊ ၁၀.၁၂၊ ၁၀.၁၃ နှင့်နောက်မှ) ...
သင်၏ Mac ကိုမည်သို့ရှင်းလင်းမလဲ
နောက်ဆုံးပေါ်မွမ်းမံခဲ့သည် 19:2020 မှာ 15 နိုဝင်ဘာ 32 တန်းတူ pistouri
update ကို install လုပ်ဖို့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ် 20h2 အောက်တိုဘာလ 2020 ၏။
Windows Update ကို
Windows 10 20H2 Media Creation Tool
အဆိုပါ update ကိုလက်ထောက်
ချိန်ညှိချက်များ►အပ်ဒိတ်များနှင့်လုံခြုံရေး - နောက်ဆုံးသတင်းများကိုစစ်ဆေးပါ(ရှိလျှင်) ။
A) ယခု Update လုပ်ပါ။
B) ယခု tool ကိုဒေါင်းလုပ် == ► MediaCreationTool20H2.exe Media Creation Tool
ယခုဤ PC ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်ကိုနှိပ်ပါ။
–► ကိုရွေးပါ ဝင်းဒိုး (နောက်ဆုံး)
–► ကိုရွေးပါWindows 10, ဗားရှင်း 2009-20H2 (build 19042.XXX)
–► ကိုရွေးပါWindows ကို 10
သင်၏လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုရွေးပါ Win10_20H2_French_x64 iso ou Win10_20H2_French_x32 iso
ထို့နောက်သင်၏ download folder သို့ရွေးချယ်ထားသောလမ်းကြောင်းသို့သွားပါ။
-►အပေါ်ညာဖက်ကလစ်နှိပ်ပါWin10_20H2_French_x64 ou Win10_20H2_French_x32 iso
Windows Explorer ဖွင့်လှစ်။
–► ကိုနှိပ်ပါ setup ကို
လာမည့် reboot သည်အထိ installation ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါ။
ဤနည်းသည် Microsoft ဆာဗာများကြောင့် Media Creation Tool ထက် ပို၍ မြန်သည်။
ဒေါင်းလုပ် (သို့) သိမ်းပါ မီဒီယာဖန်တီးမှုကိရိယာ Bat
နှင့်အတူ archive ကို extract လုပ်ပါ 7-Zip ou Winrar။ (- ►mediacreationtoolသို့ထုတ်ယူပါ။
ဖိုလ်ဒါအားဖွင့် (အဝါရောင်) ဖြူဖြူကျော်သိန်း.
–► ကိုနှိပ်ပါ MediaCreationTool (Command ဖိုင်ကို)
–► ကိုရွေးပါ ၂၀၀၉ [၂၀ နာရီ]
ကျန်လုပ်ငန်းစဉ်သည် Media Creation Tools မှသိရှိထားသောအရာများနှင့်တူညီသည်။
၎င်းမှာအားသာချက်ရှိပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်ဗားရှင်းအသစ်နှင့်ပြproblemနာရှိပါကသင်အဟောင်းကိုထည့်သွင်းနိုင်သည်။ Windows 10 1803 မှ feature update ကိုပိတ်ထားနိုင်သည်။ မိုက်ကရိုဆော့ဖ်မှနောက်ဆုံးသတင်းများမရှိတော့မှသာဤပြောင်းလဲမှုကိုအလိုအလျောက်လျစ်လျူရှုလိမ့်မည်။
ဤဆောင်းပါးသည် https://www.commentcamarche.net/faq/57791-comment-installer-la-mise-a-jour-20h2-d-october-2020 တွင်ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်သည်။
Tele RELAY တစ်ခု 30557 ရေးသားချက်များ 1 မှတ်ချက်များ
HOGA နှင့် FRANCIS NGANNOU - တိုက်ပွဲ၏ကြေငြာချက်ရက်စွဲ (တစ်ခုသာရှိလိမ့်မည်!) - ဗီဒီယို
Grand Prix Chantal Biya 2020: ပထမဆုံးအမျိုးသမီးကနေ့ ၄ ရက်တွင်အခမ်းအနားကိုဂုဏ်ပြုသည်
ချုပ်နှောင်ထားစဉ်တင်းမာမှုကိုတွေးတောဆင်ခြင်ရန်နှင့်ဖြုတ်ရန်အက်ပ် ၃ ခု
MacOS X ကိုပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန် (၁၀.၁၁၊ ၁၀.၁၂၊ ၁၀.၁၃ နှင့်နောက်ပိုင်း) - သိကောင်းစရာများ
Mac OS X 10.7၊ OS X 10.8၊ OS X 10.9၊ OS X 10.10 (Lion, ... ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်